I-Little Nell Ranch yaseLostine
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguNicole
Yiba namava kwifama yokuhlala kwi-bunkhouse epholileyo kwifama yethu yeehektare ezingama-20. Vuna imifuno egadini, yonwabele ibhotile yewayini kwiveranda ejongene nedlelo. Ifakwe kufutshane neWallowa Lake kunye ne Eagle Cap entlango.
Ime kwiihektare ezingama-20 eNortheast Oregon, indlu yethu yokuhlala ilala abantu aba-4 abanendawo yokulala enebhedi ephindwe kabini. Indlu enkulu inekhitshi, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, isitovu samaplanga, kunye nebhedi enkulukazi. Iveranda egqunywe ngaphambili inetafile yebistro yokutya. Icala elisezantsi le-bunkhouse libonelela ngendawo yabucala yangaphandle yokutya, i-BBQ, izitulo zokuphumla kunye nomgodi womlilo.
Ngexesha lasebusika ndibonelela ngayo yonke into oyifunayo ukubasa umlilo. I-bunkhouse ifakwe kakuhle kwaye ishushu ngokuyinhloko ngamaplanga. Ithambile kwaye imnandi.
Indawo enoxolo yokumisa nje imizuzu engama-25 ukusuka kuJoseph kunye neWallowa Lake, kunye nokutsibatsiba kunye nokutsiba kwi-Eagle Cap Wilderness.
4.98 ·Izimvo eziyi-202
4.98 · Izimvo eziyi-202
Iifama ezinobubele kunye noluntu olufuyiweyo, iindawo zokutyela ezilungileyo zasefama ukuya etafileni kunye nokutya okutsha okuphekelwa kuzo. Iivenkile ezinqabileyo, ubugcisa bendawo.
Sizokubulisa xa sifika kwaye sikubonise ngeenxa zonke. Ndiyavuya ukunceda nangayiphi na indlela efunekayo ukuze uqiniseke ukuba uhambo lwakho luyamangalisa. Siyathanda ukunxibelelana neendwendwe njengoko zithanda kwaye sihlonele nokuba yimfihlo kwakho.
Sizokubulisa xa sifika kwaye sikubonise ngeenxa zonke. Ndiyavuya ukunceda nangayiphi na indlela efunekayo ukuze uqiniseke ukuba uhambo lwakho luyamangalisa. Siyathanda ukunxibelela…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lostine